RaspEX Linux: distro yeiyo Raspberry Pi 3 | Linux Vakapindwa muropa
Iyo inonyanya kuzivikanwa pakati pemazhinji emabhodhi eSBC (Imwe-Bhodhi Komputa) aripo, iyo Raspberry Pi, inosvika pane yayo vhezheni 3 uye tinofara kuratidza kugoverwa kweLinux kwakanyatsogadzirirwa Raspberry Pi 3. Inodaidzwa kuti RaspEX uye inobatana nekumwe kugovera kuripo uye masisitimu anoshanda anotsigirwa nebhodhi kuti riite riite, uye chokwadi ndechekuti huwandu hwemapurojekiti ekubatsira akakwezva nekubudirira kweiyo SBC yakachipa yabudirira.
RaspEX iri yakagadzirwa naArne Exton uye inotsigira akasiyana Hardware zvikamu zveiyo itsva Raspberry Pi bhodhi Iyo nyowani vhezheni yeRaspEX iyo yakatangwa inouyawo nezvimwe zvinhu zvitsva, uye kunyanya nezvakakanganisika zvikanganiso zvichienzaniswa neshanduro dzekare. Uye zvakare, Kodi yakabatanidzwa kuti ive nenhepfenyuro yakanaka inozoperekedza mamwe mapakeji akaisirwa neakasarudzika senge Mozilla Firefox, VNC, uye zvimwe zvirongwa zvakawanda zvekugadzira nharaunda izere.
Mukuwedzera kune ruzivo rukuru rweKare, RaspEX yaisanganisira Linux kernel nyowani uye zvitsva zvinoshanda. Iyo yakavakirwa, saRaspbian, paDebian (mubazi rayo reARM, zviripachena kushanda neRaspi SoC), kunyanya Debian GNU / Linux 8.3 Jessie yakashandiswa sedanho rekuvandudza uye yakaitwawo mhando yemusanganiswa, sezvatatoona mune mamwe ma distros, ane Ubuntu 15.10 WIly Werewolf, kubva kwavanotorawo chimwe chinhu dhizaini yeRaspEX.
Chimwe chinhu chitsva chatinacho iko kutsigira kweBluetooth, iyo yakaitwa yeRaspEX mune yazvino kuvaka yakaburitswa. RaspEX inoshanda nemazvo pa iyo Raspberry Pi 3 Iine LXDE desktop nharaunda, uye sekuratidzira kwayo mugadziri, iyo vhezheni itsva yebhodhi yakaringana kufambisa sisitimu zvakanaka. Rangarira kuti iyo yakapetwa kagumi nekukurumidza kupfuura iyo Pi 3, pamusoro pekupfuura mashandiro ePi 10 ne1%.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » RaspEX Linux: distro yeiyo Raspberry Pi 3
Ndeipi Linux inoshanda sisitimu inokurudzirwa muPRi 3 kuita mota uye kamera kudzora mapurojekiti uye kuibatanidza ne Android?
OSGEO -Rarama 9.5, distro ine ese maGIS maturusi